သင်က အိပ်ရာထဲမှာ ညံ့ကြောင်း သင် မသိသေးတဲ့ လက္ခဏာ ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
သင်က အိပ်ရာထဲမှာ ညံ့ကြောင်း သင် မသိသေးတဲ့ လက္ခဏာ ၁၀ ခု
သငျက အိပျရာထဲမှာ ညံ့ကွောငျး သငျ မသိသေးတဲ့ လက်ခဏာ ၁၀ ခု
လူတိုင်းဟာ လိင်ကိစ္စမှာ သူတို့ ပါတနာတွေကို ကောင်းစေချင်ကြတာချည်းပါ။ အခု ဒီဟာကို ဖတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ ဘက်ကို ခြေတစ်လှမ်း လှည့်လာတာပါပဲ။ ဒီစာထဲမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိင်ကိစ္စ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် တစ်ယောက်က သင် မှားနေလောက်တဲ့ အရာတွေကို ရှာဖွေပေးပြီး ပြင်ဆင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁. သင် အစပျိုးတာ မလုပ်ပါဘူး
သင်က လိင်အကြောင်း တစ်နေ့လုံး စဉ်းစားနေပြီး အိမ်ရောက်တော့ တန်းဆက်ဆံချင်ပါတယ်။ သူမရတော့ အလုပ်ထဲကို စိတ်ရောက်နေပါတယ်။ သူမကို သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မပေးရင် သူမ ပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမကို အမြဲ အစပျိုးပေးတာ လုပ်ပေးပါ။ မိန်းမတွေအတွက် လိင်ကိစ္စမှာ စိတ်က အရေးကြီးဆုံးပါ။ သူတို့ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ နွှေးပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၂. သူမကို ဘာဂျာ မပေးပါဘူး
လိင်အရမ်း ဆက်ဆံချင်နေလို့ သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေးကို တစ်ချက် နှစ်ချက် ပွတ်ပေးပြီးတာနဲ့ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ သူမကို နွှေးပေးဖို့ လိုနေလို့ သူမက လိင်ဆက်ဆံမှု အရသာကို ကောင်းကောင်း ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး သူမကို ဘာဂျာ ကောင်းကောင်း ကိုင်ပေးဖို့ သတိရပေးပါ။
၃. ဆက်ဆံပြီးမှာ သူမကို မထိတော့ပါဘူး
ပူတယ်လို့ အကြောင်းပြပြီးတော့ လိင်ဆက်ဆံပြီးတာနဲ့ အဝေးကြီးကို ခွာသွားပါတယ်။ သင်က သူမနဲ့ မအိပ်ခင် စကားခဏ ပြောဖြစ်ရင်တောင် မလုံလောက်သေးပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံပြီးရင် ပွေ့ဖက်ထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။ သင်က တို့ရထိရတာ မကြိုက်ရင် အနည်းအကျဉ်း ကျောလေးကို ကုတ်ပေးတာမျိုးတွေ ကနေ စလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၄. မှားမှာ စိုးတာနဲ့ ဘာမှ အဆန်းမထွင်ပါဘူး
တစ်ခုခုမှားသွားမှာ စိုးလို့ သင် ကြားဖူးတဲ့ ပုံစံအသစ်ကို စမ်းမကြည့်မိတာမျိုး ရှိပါသလား။ အမြဲ Missionary နဲ့ Doggy နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရပါသလား။ အဲဒီအကြောက်တရားတွေကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ။ မှားယွင်းတာဟာ ဘာမှမလုပ်တာထက်တော့ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်ပါတနာက ဒီပုံစံကြီးနဲ့ နေ့တိုင်း သွားနေမယ့်အစား အသစ်အဆန်းတွေ လုပ်ရတာ ပျော်ပါလိမ့်မယ်။
၅. သင်ကောင်းအောင် သူမကို ပြီးစေချင်နေပါတယ်
သင်က လိင်ကိစ္စဆိုတာ သင့်အတွက် ကောင်းအောင် လုပ်ရတာပဲ ထင်နေပါတယ်။ သူမ ပြီးရင် သင် ဆက်ဆံရတာ ပိုစိတ်ပါပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူမကို ပြီးအောင် အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ သူမက မပြီးပဲ ပြီးချင်ယောင် ဆောင်တတ်လာပါတယ်။ အဲဒီလို မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ပါတနာ ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကို သိနေပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ အမြဲ စုံစမ်းနေတတ်ပါတယ်။
၆. သူမဘာကြိုက်လဲ မမေးရသေးပါဘူး
သင်က မိန်းမတိုင်းကို ဒီဖော်မြူလာနဲ့ချည် ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ မိန်းမတိုင်း ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ပြီးမှာပဲဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မိန်းမတိုင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ ချဉ်းကပ်နည်းလဲ အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။ သင် ဆက်ဆံခါနီးတိုင်း သူမကြိုက်တဲ့ အရာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးသင့်ပါတယ်။
၇. သူမက လုံးဝ အသံမထွက်ပါဘူး
အိပ်ရာထဲမှာ အသံသိပ်မကျယ်တဲ့ မိန်းမတွေ ရှိပေမယ့် ဘာသံမှ မထွက်တာကတော့ သူမ မကြိုက်ဘူးဆိုတာရယ်၊ အသံထွက်ရလောက်အောင် မကောင်းဘူးဆိုတာရယ်ကို ပြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မစခင်မှာ သူမ အသံထွက်ရင်၊ ညည်းရင် သင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ ဆက်ဆံစဉ်လဲ ကောင်းလား ကောင်းလား မမေးပဲ သင် ကြိုက်တဲ့ အပိုင်းလေးတွေ ပြောပြပြီး အဲဒီနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင် သူမ ပိုကြိုက်သွားမလဲဆိုတာ မေးကြည့်ပါ။
၈. သူမ “အက်တင်” လွန်နေပါတယ်
သင် သူမကို ထိလိုက်တာနဲ့ Pornstar တစ်ယောက်လို အော်ဟစ်နေရင်တော့ သရုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို သင့်ကို ပိုအားရှိစေဖို့နဲ့ သူတို့ မပြီးဆုံးနိုင်တာကို ကာကွယ်ဖို့ လုပ်နေကြတာပါ။ သူမကို အဲဒီလို အော်တာ သင့်ကို စိတ်တက်ကြွစေပေမယ့် ဘယ်အရာတွေက သူမအတွက် အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ သင်သိသင့်တယ်လို့ ပြောကြည့်ပေးပါ။
၉. သင့် လိင်တံ ပြသနာကို ပြောမပြပါဘူး
အဲဒါဟာ အိပ်ရာထဲမှာ အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ပြီး သူမက သင်မပြောလဲ သိမှာပါ။ ပန်းသေပန်းညှိုး၊ အချိန်မတိုင်မီ သုတ်လွှတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်ရင် သင့်ကောင်မလေးကို ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ သင်က အဲဒါကို ကုနေတယ်ဆိုတာလဲ ပြောပြထားပါ။ သူမ သည်းခံပါလိမ့်မယ်။ သူမကို ပြီးအောင်လဲ လက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပါးစပ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၁၀. သူမက ဘယ်တော့မှ မပြီးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သင်လဲ သင်ပြီးတာနဲ့ ဆက်ဆံတာ ရပ်လိုက်ပါတယ်
အရင်ဆုံး သူမကို ပြီးကို ပြီးအောင် လုပ်ပေးပါ။ ယောက်ျားတော်တော်များများဟာ သူတို့ပြီးတာနဲ့ မိန်းမလုပ်သူက ဘာမှ မပြောရင် ဟိုဘက်လှည့်ပြီး အိပ်ဖို့ မီးစိမ်းပြတာလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ သင် သူမ ပြီးတာ မတွေ့ရင် သူမ မပြီးပါဘူး။ သူမ မပြီးတာကို ဂရုမစိုက်ရင်တော့ သင် ပြသနာ အကြီးကြီး တက်ပါပြီ။ သင် ပြီးရင်တောင် သူမကို ပြီးစေဖို့ ပါးစပ်၊ လက်၊ Sex Toy ဘယ်ဟာနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ပေးပါ။
လူတိုငျးဟာ လိငျကိစ်စမှာ သူတို့ ပါတနာတှကေို ကောငျးစခေငျြကွတာခညျြးပါ။ အခု ဒီဟာကို ဖတျနတေယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ မှနျကနျတဲ့ ဘကျကို ခွတေဈလှမျး လှညျ့လာတာပါပဲ။ ဒီစာထဲမှာဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လိငျကိစ်စ ကြှမျးကငျြ ပညာရှငျ တဈယောကျက သငျ မှားနလေောကျတဲ့ အရာတှကေို ရှာဖှပေေးပွီး ပွငျဆငျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁. သငျ အစပြိုးတာ မလုပျပါဘူး
သငျက လိငျအကွောငျး တဈနလေုံ့း စဉျးစားနပွေီး အိမျရောကျတော့ တနျးဆကျဆံခငျြပါတယျ။ သူမရတော့ အလုပျထဲကို စိတျရောကျနပေါတယျ။ သူမကို သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျမပေးရငျ သူမ ပြျောမှာ မဟုတျပါဘူး။ သူမကို အမွဲ အစပြိုးပေးတာ လုပျပေးပါ။ မိနျးမတှအေတှကျ လိငျကိစ်စမှာ စိတျက အရေးကွီးဆုံးပါ။ သူတို့ကို စိတျပိုငျးဆိုငျရာရော ရုပျပိုငျးဆိုငျရာပါ နှေးပေးဖို့ လိုပါတယျ။
၂. သူမကို ဘာဂြာ မပေးပါဘူး
လိငျအရမျး ဆကျဆံခငျြနလေို့ သူမရဲ့ ပနျးဖူးလေးကို တဈခကျြ နှဈခကျြ ပှတျပေးပွီးတာနဲ့ ထညျ့လိုကျပါတယျ။ သူမကို နှေးပေးဖို့ လိုနလေို့ သူမက လိငျဆကျဆံမှု အရသာကို ကောငျးကောငျး ခံစားရမှာ မဟုတျပါဘူး။ အရငျဆုံး သူမကို ဘာဂြာ ကောငျးကောငျး ကိုငျပေးဖို့ သတိရပေးပါ။
၃. ဆကျဆံပွီးမှာ သူမကို မထိတော့ပါဘူး
ပူတယျလို့ အကွောငျးပွပွီးတော့ လိငျဆကျဆံပွီးတာနဲ့ အဝေးကွီးကို ခှာသှားပါတယျ။ သငျက သူမနဲ့ မအိပျခငျ စကားခဏ ပွောဖွဈရငျတောငျ မလုံလောကျသေးပါဘူး။ လိငျဆကျဆံပွီးရငျ ပှဖေ့ကျထားနိုငျရငျ အကောငျးဆုံးပါ။ သငျက တို့ရထိရတာ မကွိုကျရငျ အနညျးအကဉျြး ကြောလေးကို ကုတျပေးတာမြိုးတှေ ကနေ စလုပျနိုငျပါတယျ။
၄. မှားမှာ စိုးတာနဲ့ ဘာမှ အဆနျးမထှငျပါဘူး
တဈခုခုမှားသှားမှာ စိုးလို့ သငျ ကွားဖူးတဲ့ ပုံစံအသဈကို စမျးမကွညျ့မိတာမြိုး ရှိပါသလား။ အမွဲ Missionary နဲ့ Doggy နဲ့ပဲ နှဈပါးသှားနရေပါသလား။ အဲဒီအကွောကျတရားတှကေို ဘေးဖယျထားလိုကျပါ။ မှားယှငျးတာဟာ ဘာမှမလုပျတာထကျတော့ ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ပါတနာက ဒီပုံစံကွီးနဲ့ နတေို့ငျး သှားနမေယျ့အစား အသဈအဆနျးတှေ လုပျရတာ ပြျောပါလိမျ့မယျ။
၅. သငျကောငျးအောငျ သူမကို ပွီးစခေငျြနပေါတယျ
သငျက လိငျကိစ်စဆိုတာ သငျ့အတှကျ ကောငျးအောငျ လုပျရတာပဲ ထငျနပေါတယျ။ သူမ ပွီးရငျ သငျ ဆကျဆံရတာ ပိုစိတျပါပါတယျ။ အဲဒီတော့ သူမကို ပွီးအောငျ အတငျးအကပျြ ဖိအားပေးပါတယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ သူမက မပွီးပဲ ပွီးခငျြယောငျ ဆောငျတတျလာပါတယျ။ အဲဒီလို မဖွဈပါစနေဲ့။ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျတဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျဟာ သူ့ရဲ့ ပါတနာ ဘာလိုခငျြလဲဆိုတာကို သိနပွေီး ဘာဆကျလုပျရမလဲ အမွဲ စုံစမျးနတေတျပါတယျ။
၆. သူမဘာကွိုကျလဲ မမေးရသေးပါဘူး
သငျက မိနျးမတိုငျးကို ဒီဖျောမွူလာနဲ့ခညျြ ခဉျြးကပျပါတယျ။ မိနျးမတိုငျး ဒီလိုလုပျလိုကျရငျ ပွီးမှာပဲဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ခဉျြးကပျပါတယျ။ တကယျတော့ မိနျးမတိုငျးဟာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မတူကွပါဘူး။ ခဉျြးကပျနညျးလဲ အမြိုးမြိုး ရှိကွပါတယျ။ သငျ ဆကျဆံခါနီးတိုငျး သူမကွိုကျတဲ့ အရာကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး မေးသငျ့ပါတယျ။
၇. သူမက လုံးဝ အသံမထှကျပါဘူး
အိပျရာထဲမှာ အသံသိပျမကယျြတဲ့ မိနျးမတှေ ရှိပမေယျ့ ဘာသံမှ မထှကျတာကတော့ သူမ မကွိုကျဘူးဆိုတာရယျ၊ အသံထှကျရလောကျအောငျ မကောငျးဘူးဆိုတာရယျကို ပွတာ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ မစခငျမှာ သူမ အသံထှကျရငျ၊ ညညျးရငျ သငျကွိုကျတယျဆိုတာ ပွောပွထားသငျ့ပါတယျ။ ဆကျဆံစဉျလဲ ကောငျးလား ကောငျးလား မမေးပဲ သငျ ကွိုကျတဲ့ အပိုငျးလေးတှေ ပွောပွပွီး အဲဒီနရောတှမှော ဘယျလိုလုပျလိုကျရငျ သူမ ပိုကွိုကျသှားမလဲဆိုတာ မေးကွညျ့ပါ။
၈. သူမ “အကျတငျ” လှနျနပေါတယျ
သငျ သူမကို ထိလိုကျတာနဲ့ Pornstar တဈယောကျလို အျောဟဈနရေငျတော့ သရုပျဆောငျနတော ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဲဒါကို သငျ့ကို ပိုအားရှိစဖေို့နဲ့ သူတို့ မပွီးဆုံးနိုငျတာကို ကာကှယျဖို့ လုပျနကွေတာပါ။ သူမကို အဲဒီလို အျောတာ သငျ့ကို စိတျတကျကွှစပေမေယျ့ ဘယျအရာတှကေ သူမအတှကျ အကောငျးဆုံးလဲဆိုတာ သငျသိသငျ့တယျလို့ ပွောကွညျ့ပေးပါ။
၉. သငျ့ လိငျတံ ပွသနာကို ပွောမပွပါဘူး
အဲဒါဟာ အိပျရာထဲမှာ အထငျရှားဆုံး ဖွဈပွီး သူမက သငျမပွောလဲ သိမှာပါ။ ပနျးသပေနျးညှိုး၊ အခြိနျမတိုငျမီ သုတျလှတျခွငျးတှေ ဖွဈရငျ သငျ့ကောငျမလေးကို ပွောပွထားသငျ့ပါတယျ။ သငျက အဲဒါကို ကုနတေယျဆိုတာလဲ ပွောပွထားပါ။ သူမ သညျးခံပါလိမျ့မယျ။ သူမကို ပွီးအောငျလဲ လကျနဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ပါးစပျနဲ့ ဖွဈဖွဈ လုပျပေးလိုကျပါ။
၁၀. သူမက ဘယျတော့မှ မပွီးပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ သငျလဲ သငျပွီးတာနဲ့ ဆကျဆံတာ ရပျလိုကျပါတယျ
အရငျဆုံး သူမကို ပွီးကို ပွီးအောငျ လုပျပေးပါ။ ယောကျြားတျောတျောမြားမြားဟာ သူတို့ပွီးတာနဲ့ မိနျးမလုပျသူက ဘာမှ မပွောရငျ ဟိုဘကျလှညျ့ပွီး အိပျဖို့ မီးစိမျးပွတာလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ သငျ သူမ ပွီးတာ မတှရေ့ငျ သူမ မပွီးပါဘူး။ သူမ မပွီးတာကို ဂရုမစိုကျရငျတော့ သငျ ပွသနာ အကွီးကွီး တကျပါပွီ။ သငျ ပွီးရငျတောငျ သူမကို ပွီးစဖေို့ ပါးစပျ၊ လကျ၊ Sex Toy ဘယျဟာနဲ့ ဖွဈဖွဈ အားသှနျခှနျစိုကျ လုပျပေးပါ။
Previous: ပီကေက သင့်ပါးစပ်ကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းစေတာလဲ
Next: ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတည်ထောင်မည့်သူတိုင်း သတိပြုဆင်ခြင်သင့်သည့် အချက်(၅)ခု